Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muqdisho-KNN-Madaxweynayaasha Dowlad gobaledyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islam Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullahi Deni ayaa la filayaa in ay goordhaw soo garaan magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka.
Madaxweyneyaashan ayaa Muqdisho u imanaya sidii ay ula kulmi lahaayeen, Madaxweynaha Dowlada Federalka Soomaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo ay kawada hadlayaan arrimaha doorashoyinka dalka, maadama ay horay u diideen in ay ka qeybgalaan Shirkii Dhuumsamareeb 3 ee lagu go’aamiyey qaabka ay noqoneyso doorashada soo aadan ee dalka.
Hasa ahaatee arrinta ugubka ah ayaa ah in madaxweyneyaashan imaatinkooda in maanta loo xiray dhamaanba wadooyinka magaalada Muqdisho, oo la diiday isku socodkii gadiidka magaalada, waliba iyaga oo aan weli ka soo bixin magaaloyinkii ay ku nolayeen ee Garowe iyo Kismaayo.
Shacabka Muqdisho ayaa saaka ku soo toosay waddooyinka intooda badan oo xiran, iyadoo dadka ay u lugeynayaan maanta, goobahooda ganacsi iyo xarumaha waxbarashada, iyo kuwa shaqada intaba .
Waxaa kale oo xusid mudan in wax horay looga bartay aysan aheyn in marka madaxda maamullada ay imanayaan magaalada Muqdisho wadooyinka la xiri jirin, taas oo dadka reer Muqdisho ay Su’aalo badan iska weydiinayaan.
Qaar ka mida Shacabka Muqdisho oo KNN u waramay ayaa si cadho leh uga hadlay, arintaan iyaga oo madaxda dowlada ka dalbaday in aan wadooyinka maristooda aan lagu dhibin.
Previous Duqa Muqdisho oo is bedel ku sameeyay qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Mogadishu Journal » Kalidou Koulibaly ‘Waxaa Loo Balan Qaaday’ Man City